Faah-faahinta Kulamadi Caawa ee Koobka Yurub
Kooxda Liverpool ayaa wacdaro la yaab leh ka dhigtay dalka Slovenia kadib marki ay 7-0 kusoo xaaqday kooxda Maribor.Goolasha waxaa min laba kala dhaliyay Roberto Firmino iyo Mohamed Salah, halka saddexda kalana ay kala qeybsadeen Philippe Coutinho, Alex Oxlade-Chamberlain iyo Trent Alexander-Arnold.
Waxay aheyd guushuu ugu cusleyd ee ay abid koox Ingiriis ah kusoo gaarto meel ka baxsan Britain tartanka Yurub.
Kooxaha kale ee British-ka ah ee guulaha kasoo hooyay koobka Yurub waxaa ka mid ah Manchester City oo 2-1 ku maquunisay kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga.
Manchester City 20-ki daqiiqo ee ugu horreeyay ciyaarta ayay iska boobsiisay Napoli, waxaana goolasha u dhaliyay Raheem Sterling iyo Gabriel Jesus. Naoli oo ciyaar wanaagsan soo bandhigtay qeybti danbe ayaa heshay laba rigoore, kii hore waxaa khasaariyay Dries Mertens waxaa ka qabtay goolhaye Ederson, balse rigoorihi labaad waxaa gool u dhaliyay Amadou Diawara. Wuxuu ahaa goolkiisi ugu horreeyay ee uu u dhaliyo Napoli.
Ciyaaraha kalana kooxda difaacaneysa koobka ee Real Madrid ayaa ku dhacday in ay magaalada Madrid uga badiso naadiga Tottenham ee dalka Ingiriiska. Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay bar-barro 1-1 ah. Tottenham ayaa hogaanka ciyaarta ku qabatay gool uu kooxdiisa ka dhaliyay Raphael Varane oo difaaca uga ciyaara Real Madrid, balse Real waxaa goolka bareejada rigoore ugu dhaliyay Ronaldo.
Spartak Moscow waxay 5 - 1 ku qabatay Sevilla. Feyenoord waxaa 2-1 ku cuntay Shakhtar Donetsk. Besiktas waxay 2-1 ku khaarijiday Monaco. Porto waxay 3-2 kusoo khasaartay kooxda RasenBallsport Leipzig, halka APOEL Nicosia iyo Borussia Dortmund ay ku kala baxeen 1 – 1.